Periscope inowedzera rutsigiro rwema 360-degree mavhidhiyo | IPhone nhau
Kutanga kwaive kutepfenyurwa kweiyo mhenyu vhidhiyo, iyo kunyangwe hazvo yaive isiri iyo Twitter yakaigadzira, yaive iyo yakaikurudzira pakati pevanhu. Ino ndiyo 360-degree vhidhiyo, iyo nyowani nzira yekuratidza nyika zvese zvakatikomberedza. Twitter ichangobva kuzivisa kuti iri kushanda kutsigira 360-degree vhidhiyo kuburikidza neayo Periscope mhenyu vhidhiyo application, mhenyu vhidhiyo sevhisi iyo yakave imwe yeanonyanya kufarirwa uye ari-kudiwa masevhisi mumwedzi ichangopfuura. Nevashandisi.
Iyi ficha nyowani ichashanda kungofanana nemasevhisi ayo anotopa urwu rudzi rwebasa. Mavhidhiyo anotepfenyurwa mune ino fomati anosanganisira iyo Live 360 ​​tag uye kuti tione zvese zvakakomberedza chiitiko chiri kutaurwa, isu tichafanirwa kufambisa chifananidzo nemunwe wedu. Sekureva kwaPeriscope pane yake blog kwaakaburitsa nhau, 360-degree mavhidhiyo inhanho kumberi kune vashandisi kuti vanyure mune izvo zvirimo zvavari kuona, sekunge vaive chikamu chechiito.
360-degree vhidhiyo haisi yekungotiendesa kunzvimbo dzatisati tamboenda, ndezvekubatana nevanhu uye nekuona chimwe chinhu chitsva navo. Nemavhidhiyo aya, mushandisi anopa nzira yekuita kuti vashandisi vatore chikamu munharaunda yavari kugovana nayo.
360-degree mavhidhiyo anotsigirwa neiyo Periscope application kungofanana nedesktop vhezheni, kunze kwekunge tichishandisa Safari browser, iyo parizvino isingawirirane nebasa iri. Parizvino basa iri riri mubeta, saka vashoma vashandisi ndivo vakawana kwariri. Kana mangoti sevhisi yagadzirira, mukati memavhiki mashoma pane ichangoburwa, iri basa rinenge rave kuwanikwa kune vese vashandisi vepuratifomu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Periscope inowedzera rutsigiro rwema360-degree mavhidhiyo
Vamwe varidzi veAirPod vanogunun'una nenyaya dzemabhatiri